Soomaali maxkamad la soo taagay - BBC Somali
Soomaali maxkamad la soo taagay
15 Jannaayo 2014
Waxaa Nairobi ka bilaabatay maxkamadaynta Afar ruux oo Soomaali ah oo lala xiriirinayo weerarkii Westgate ka dhacay afar bilood ka hor.
Afartani ruux ayaa gabi ahaanba beeniyay eedaymaha loo haysto ee ah inay taageerayeen kooxda argagaxiso ama ay Kenya ku joogeen si sarci darro ah.
Boliiska Kenya ayaa sheegay in afartaasi qof lagu eedeeyay inay gabaad siiyeen kooxdii fulisay weerarkii Westgate, isla markaasina ay xiriir la samaynayeen kooxdaasi afar maalmood ka hor weerarkii Westgate.
Dhalinyaradan ayaa waxay yihiin kooxdii ugu horreysay ee loo maxkamadeeyo weerarkii Westgate oo ahaa kii ugu xumaa tan iyo weerarkii lagu qaaday safaradii Maraykanka sanadkii 1998 kii oo ay ku dhinteen 224 ruux.
Weerarkii lagu qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate ee magalaadatani Nairobi, oo socday mudo afar maalmood ah, ayaa waxaa lagu dilay 67 qof.
Ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaas.
Image caption Kooxdii weerarka gaysatay oo laga helay sawirr qaadaha xarunta
Mid kamid ahaa kooxdii weerarka ka gaysatay Westgate ayaa la sheegay inuu haystay dhalashada wadanka Norway, kaasi oo lagu magacaabi jiray Xassan Cabdi Dhuxulow.
Militeriga Kenya, ayaa tilmaamay in dhamaan afartii nin ee weerartay xarunta ganacsiga Westgate ay ku dhinteen gudaha xarunta intii uu socday howlgalku.
Al- Shabaab ayaa xiligaasi sheegtay inay weerarkaasi uu sabab u ahaa joogitaanka ciidamada Kenya ee gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo taageeraya dowladda Federalka Soomaaliya.